Kitra any Eoropa: sahiran-tsaina ny PSG fa maratra i Mbappé sy i Neymar - ewa.mg
Kitra any Eoropa: sahiran-tsaina ny PSG fa maratra i Mbappé sy i Neymar
Foot - News - Sport - Kitra any Eoropa: sahiran-tsaina ny PSG fa maratra i Mbappé sy i Neymar
Ao anatin’ny fitaintainana fatratra ireo tomponandraikitry ny Paris St Germain, amin’izao fotoana izao. Fantatra mantsy fa maratra ireo mpilalao andrin’ity ekipa parizianina ity dia i Kylian Mbappé sy i Neymar. Samy voadona mantsy izy mirahalahy ireto, nandritra ny filalaovany tany amin’ny ekipam-pireneny avy, ny talata lasa teo. Araka ny fantatra, mety haharitra herinandro ny tsy fahazoan’izy mirahalahy ireo miakatra kianja.
Araka izany, mety tsy ho afaka hiatrika ny lalao mandroso hikatrohana amin’ny Liverpool, eo amin’ny andro fahadimy amin’ny fifanintsanana isam-bondrona, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa «ligue des champions», izy mirahalahy. Fihaonana, hotanterahina ao amn’ny Parc des Princes, ny alarobia 28 novambra, ho avy izao.
Raha tsiahivina, niatrika lalao firahalahiana, tamin’ny liona tsy voafolak’i Kameronina, ny talata lasa teo, i Brezila. Vao nanomboka 8 mn monja anefa ny fihaonana dia efa niala ny kianja i Neymar, taorian’ny daka lavitra nataony ka naharovitra ny tongony havanana. Marihina fa nandresy tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0 ny Brezilianina, tamin’izany. Mbappé indray voadona teo amin’ny sorony, nandritra ny fihaonan’i Frantsa, tamin’i Orogoay, izay nandresen’ny Frantsay, tamin’ny isa 1 no ho 0 ihany koa.
Manana isa 5 ary mitana ny laharana fahatelo, ny PSG ao amin’ny vondrona misy azy, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa.
L’article Kitra any Eoropa: sahiran-tsaina ny PSG fa maratra i Mbappé sy i Neymar a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 22/11/2018
Kitra - Mbappé - Neymar - PSG
Foot - News - News Mada
Kitra atsy Afrika Atsimo: tsy anisan’ireo voan’ny Coronavirus i Dax
Na tsy mbola manomboka aza ny fifaninanam-pirenena atsy Afrika Atsimo noho ny fisian’ilay valanaretina Covid-19, efa miverina manao ny fanazarantenany kosa ireo klioba isanisany. Anisan’izany ny Black Leopard Football Club, ilalaovan’Andriamirado Arohasina (Dax).Nisy ny fitiliana natao tamin’ireo mpilalao tsirairay avy ka tsy anisan’ireo mitondra ny tsimokaretina kosa ity mpilalao malagasy, mandrafitra ny Black Leopard ity. Ireo izay nahitana izany kosa, naverina nahiboka avy hatrany indray ka natoka-monina ary tsy afaka manao fanazarantena. Manohy ny fanomanana ny ho fiatrehana ny fifanintsanana kosa ireo salama.Marihina fa efa afaka miverina miakatra kianja i Dax, taorian’ny nanafahan’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa) ny saziny, ny zoma 5 jona lasa teo. Raha tsiahivina, voasazy tsy mahazo milalao mandritra ny efa-bolana, nanomboka ny fiandohan’ny volana febroary 2020, ny tovolahy noho ny tsy naha ara-dalàna ny fifindran-toerany niala tao amin’ny Fosa Jr nankao amin’ny Kaiser Chiefs, Afrika Atsimo. Noho io antony io, tsy voaantso tao amin’ny Barea de Madagascar izy teo amin’ny fifanintsanana nikatrohana tamin’i Kenya sy i Niger. Miandry ny fiantsoana azy indray i Dax izay efa nanambara fa mbola vonona ny hilalao ao amin’ny Barea, ary hanome ny fahaizany sy ny heriny rehetra ho an’i Madagasikara. TompondakaL’article Kitra atsy Afrika Atsimo: tsy anisan’ireo voan’ny Coronavirus i Dax a été récupéré chez Newsmada.
Vonona hanohana hatramin’ny farany ny ekipam-pirenena malagasy ny Club des supporteurs du football malagasy (CSFM). Efa nanomboka tamin’ny taona 2000 no nitsangana ara-panjakana ny Club des supporteurs du football malagasy (CSFM). Mbola Scorpion no anaran’ny ekipam-pirenena tamin’izany. Nandray anjara tao anatin’ny komity nanova ny anaran’ny ekipa ho barea ny filohan’ny CSFM. Efa nahazo mari-pankasitrahana avy amin’ny federasiona malagasy ny baolina kitra (FMF) ihany koa ity fikambanana mpanohana ny baolina kitra malagasy ity. « Faly izahay fa tafakatra amin’ny dingan’ny famaranana amin’ny CAN 2019 izay atao any Caméroun ny barea an’i Madagasikara. Vonona hanohana hatrany ny ekipam-pirenena izahay », hoy ny filohan’ny CSFM, Rakotondrahova Honoré. Misy telo ny fikambanana mpanohana ny ekipam-pirenena malagasy. Nilaza ny Sekretera jeneraly, Ranaivo Louis de Gonzague nandritra valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety nataon’ny fikambanana ny 24 oktobra 2018 fa maniry ny hanambatra izany ho iray ny CSFM mba ho “loko iray, fihetsika iray, mpilalao faha-12”. Manao antso avo ny mpitia baolina kitra ihany koa ny fikambanana hiray hina hanohana barea an’i Madagasikara ho fiarovana ny voninahi-pirenena. Sata mifehy ny CSFM ny fanohanana ny ekipam-pirenena sy ny ekipa malagasy mifanandrina amin’ny ekipa any ivelany. Ankoatra ny fanohanana eny an-kianja dia mandray anjara amin’ny fanohanana ara-pitaovana ihany koa ny fikambanana. Betsaka ireo asa fanohanana efa nataony toy ny fanomezana fanamiana, baolina, « argent de poche »…Araka ny tarehimarika voaray, 815 ny mpikambana manana karatra ao amin’ny CSFM. Lynda A. Cet article CLUB DES SUPPORTEURS DU FOOTBALL MALAGASY : Mpanohana mavitrika ny ekipam-pirenena est apparu en premier sur déliremadagascar.
NBA – Voka-dalao 4 Decembre 2018 – Dallas Mavericks vs Portland Trail Blazers
Mavericks / 111 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval H. Barnes 32 4/12 0/3 3/5 2 2 4 1 1 1 3 1 11 5 L. Doncic 32 6/14 2/4 7/9 2 7 9 3 3 0 2 0 21 21 D. Jordan 31 4/8 0/0 4/5 2 15 17 2 1 1 0 1 12 28 D. Smith Jr. 31 4/9 1/4 3/5 1 1 2 9 1 1 3 1 12 15 W. Matthews 31 6/12 3/6 2/3 0 1 1 2 3 1 0 0 17 14 D. Powell 16 2/5 2/3 1/2 3 1 4 1 4 0 2 0 7 6 M. Kleber 16 4/7 0/2 0/0 4 1 5 2 2 3 1 1 8 15 D. Finney-Smith 17 2/3 1/1 0/0 1 3 4 0 1 1 0 0 5 9 D. Harris 17 3/6 2/5 1/2 0 3 3 2 0 1 0 0 9 11 J.J. Barea 17 3/11 0/2 3/4 0 2 2 3 3 2 2 0 9 5 Total 38/87 11/30 24/35 15 36 51 25 19 11 13 4 111 Trail Blazers / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval A. Aminu 34 5/6 1/2 1/2 3 10 13 2 2 1 1 0 12 25 M. Harkless 23 2/5 1/2 0/0 0 3 3 0 4 1 0 0 5 6 J. Nurkic 30 4/9 0/0 1/2 2 9 11 1 6 1 4 2 9 14 D. Lillard 38 10/23 2/8 11/12 2 6 8 8 5 1 6 1 33 31 C. McCollum 40 7/19 2/7 2/2 1 2 3 4 5 2 2 0 18 13 Z. Collins 17 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 4 M. Leonard 6 0/0 0/0 1/1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 N. Stauskas 15 3/7 0/3 0/0 1 2 3 1 1 0 0 0 6 6 E. Turner 30 5/10 0/0 3/4 2 3 5 4 2 0 2 1 13 15 S. Curry 9 1/3 1/2 0/0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 -1 Total 38/84 7/24 19/23 11 37 48 20 29 7 18 5 102
Ligue 1 – Voka-dalao 5 Decembre 2018 – FC Nantes – Olympique de Marseille ( 3-2 )
Hampiantrano, lalao iraisam-pirenena roa goavana, ny taranja baolina kitra, amin’ity anio ity. Hotanterahina, etsy amin’ny kianjaben’ny Mahamasina sy eny Vontovorona, ny fifaninanana afrikanina, handraisan’ny Cnaps Sport sy ny Elgeco Plus, anjara. Hifantoka amin’ny taranja baolina kitra avokoa ny sain’ny rehetra, amin’ity alarobia ity, na eo aza ny famoahan’ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny voka-pifidianana eo amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny repoblika. Hotanterahina amin’ity anio ity tokoa mantsy ny lalao mandrdoso eo amin’ireo fifaninanana afrikanina, handraisan’ny Cnaps Sport sy ny Elgeco Plus, anjara amin’izany. Hizara roa ny fifaninanana, satria etsy amin’ny kianjaben’ny Mahamasina, no handray ny Deportivo Unidad, avy any Ginea Ekoatorialy, eo amin’ny fiadiana ny amboaran’ny kaonfederasiona. Eny amin’ny kianja Complexe sportif Vontovorona kosa indray no hampiantrano ny FC Platinum avy any Zimbaboe, ny Cnaps Sport, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika. Ekipa samy tsy fantatra avokoa izy roa tonta ireo. Na izany aza, mety tsy hifanalavitra amin’ny fomba filalaon’ireo ekipam-pireneny. Vonona tanteraka ny Cnaps Sport sy ny Elgeco Plus, hiatrika ireo mpifanandrina aminy ireo. Efa tonga eto rahateo ny Zimbaboeanina sy ny Gineanina, nanambara fa tsy hiaro tena fa hamono baolina. Tsotra ny paikadin’ny mpanazatra malagasy, amin’ity lalao mandroso ity. Mila mamono baolina roa farafahakeliny ary tsy hamonoana baolina. Na izany aza, mila mitandrina ihany eo amin’ny fiarovantena fa manao baolina langalanga ireto ekipa ireto satria somary manatombo eo amin’ny haben’ny vatana. Marihina fa lalao savaranonando, ity hatrehin’ny Cnaps Sport sy ny Elgeco Plus ity. Afaka herinandro ny fihaonana miverina, izany hoe hatao ny 4 na ny 5 desambra, ho avy izao. Manantena ny fahatongavan’ny mpijery ho maro izy ireo, hanohana sy hankahery, hatramin’ny farany. TompondakaL’article Kitra afrikanina: samy vonona handresy ny Cnaps sy ny Elgeco Plus a été récupéré chez Newsmada.
Ligue 1 – Voka-dalao 5 Decembre 2018 – Montpellier Hérault SC – LOSC ( 0-1 )
Foot – Voka-dalao – Еѕраnуоl vs Βаrсеlоnа 0−4